တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီက COP15 အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများအားလုံးပါဝင်သော အသိုက်အဝန်းကို အားပေးထောက်ခံ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး ကုလသမဂ္ဂ အဓိကအစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိအာလုံးပါဝင်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ဇီဝမျိုးကွဲများကို ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုံအမိမြေကို ကူညီရာရောက်သလို လူသားမျိုးနွယ်၏ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား အထောက်အကူပြုနေပါတယ်” ဟု ၁၅ ကြိမ်မြောက် ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး (COP15) တွင် ရှီက ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးအား တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကူမင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့တွင် COP15 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွင်း ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ကုလသမဂ္ဂ (UN) လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် UN သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် အမှုဆောင်အရာရှိ Inger Andersen အား အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှီက ဘုံအနာဂတ်ကို ရှေးရှုသောအားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခရီးသစ် စတင်ရန်နှင့် လက်ချင်းယှဉ်တွဲရန် နိုင်ငံများအား ပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဇီဝမျိုးကွဲဆုံးရှုံးမှုနှင့် ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန်ရေး ရည်မှန်းချက်နှင့် ထိရောက်သော ဖြေရှင်းချက်များ ပေါ်ထွက်လာရန် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ကို သတိပေးထားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့တွင် COP15 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွင်း ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Elizabeth Maruma Mrema အား အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ဇီမျိုးကွဲဆိုတာက ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် အားမာန်နှင့် တက်ကြွမှုပြည့်ဝစေပြီး လူသားများ အသက်ရှင်သန်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ (UN) လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် UN သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် အမှုဆောင်အရာရှိ Inger Andersen က “သဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ” က စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနှုန်းအဖြစ်ကို ရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် Wuyishan အမျိုးသားဉယျာဉ်တွင် တိမ်နှင့် မြူခိုးများ ရစ်ဝိုင်းနေသော တောင်တန်းများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Elizabeth Maruma Mrema ကလည်း ဇီဝမျိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းက ယခုဆယ်စုနှစ်၏ သတ်မှတ်ထားသောတာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်မတို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်က ဆုံးရှုံးမှုတွေ ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ထိရောက်တဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲရပါမယ်” ဟု Mrema က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဆန်းရှီးပြည်နယ် Datong မြို့၊ Yunzhou ခရိုင် Tujing ကျေးရွာရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုဓာတ်အားပေးစခန်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီက COP15 သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အလွန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးကွဲမူဘောင် အဆုံးသတ်ခြင်းအတွက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သလို အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာ့ ဇီဝမျိုးကွဲကာကွယ်ခြင်းအတွက် ရည်မှန်းချက်များနှင့် လမ်းကြောင်းများ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလွန်အရေးပါကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိ သက်ရှိများအားလုံးပါဝင်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ထူထောင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ သဘောတူညီချက် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ခွန်အားများ စုပေါင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက အတွေးအမြင်အဆိုပြုထားသော ဂေဟဗေဒစနစ်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းအား မီးမောင်းထိုးပြရန် ကုလသမဂ္ဂမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပထမအကြိမ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ဖြစ်သော COP15 သို့ အစိုးရများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅,၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
“လူသားနဲ့ သဘာဝကြားက ဆက်ဆံရေး ဟန်ချက်ညီစေရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သမ္မတ ရှီက အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ လူသားများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများမှာလည်း ဂေဟဗေဒနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကန့်အသတ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးရဲ့ နှစ်ဘက်အကျိုးရှိမှု သေချာစေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်” ဟု ခိုင်မာသောဂေဟဗေဒစနစ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်က သဘာဝအလျောက် ပိုင်ဆိုင်မှုရော စီးပွားရေးပါ တစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုလျက် ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် သမ္မတ ရှီက အစိမ်းရောင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုချမှတ်ခြင်း အရေးပါမှုက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား အလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အစိမ်းရောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချမှတ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံများအကြား အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အသီးအပွင့်များ မျှဝေခြင်းအတွက်လည်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
လူမှုရေး ညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် ပြည်သူများ၏ သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားလျက် နိုင်ငံတကာဥပဒေအနေဖြင့် မျှတ၍ ညီမျှမှုရှိသော နိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အခြေခံထားရှိသင့်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးအသစ်များသည် ကျွန်တော်တို့က ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ထားရန် လိုအပ်သော်ငြားလည်း လက်တွေ့ကျပြီး ညီမျှမှုရှိရေးအတွက် ဦးတည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာကမ္ဘာ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပိုမိုမျှတပြီး သာတူညီမျှရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘဏ် (Asian Development Bank) ၏ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး Yolanda Fernandez Lommen က တရုတ်နိုင်ငံသည် ဇီဝမျိုးကွဲများစွာရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတ ရှီက ကြေညာထားသော ရည်မှန်းချက်များ၊ အစီအစဉ်များနှင့် မူဝါဒများအားလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက်သာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျန်နိုင်ငံများအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တည်ထောင်ခြင်းတွင် အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ် တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံသည် အားလုံးအတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ အစိမ်းရောင်နှင့် ပွင့်လင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အလေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွေးအမြင်အသစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကတိပြုထားသော ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုနှင့် တည်ရှိမှုအား ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ကုန်းမြေဧရိယာ ၂၃၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်များသည် နိုင်ငံအတွင်း တွေ့ရှိရသော အဓိက ကုန်းနေတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်အတူ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားသောဧရိယာစနစ်တစ်ခု ထူထောင်ရန် ပို၍လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ ရှီက ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ ဇီဝမျိုးကွဲကာကွယ်ရေး ပံ့ပိုးပေးရန် ကူမင်း ဇီဝမျိုးကွဲရန်ပုံငွေ ထူထောင်ရေးအတွက် ယမ် ၁.၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၃ သန်းခန့်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလျက်ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချခြင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရေးနှင့် ကာဗွန်အလယ်အလတ်အဆင့်နိုင်ရေး ပန်းတိုင်များ ရောက်ရှိစေရန် အဓိကနယ်ပယ်များနှင့် ကဏ္ဍများတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် လျှော့ချရေး အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရန်အပြင် ပံ့ပိုးမှုဆောင်ရွက်ချက်များစွာအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်များ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍရောနှောမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊ ကြီးမားသောလေစွမ်းအင်နှင့် သဲကန္တာရဒေသများ၊ ကျောက်ဆောင်ပေါများသောဒေသများတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အခြေပြုများ (photovoltaic bases) စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအပေါ် လျှင်မြန်သော တိုးတက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှီက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဇီဝမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အားကြိုးမာန်တက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးမှု ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား ကမ္ဘာ့အသိုက်အဝန်းက အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
COP15 ကွန်ဖရင့်အား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်းသည် “ဇီဝမျိုးကွဲကဏ္ဍတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုနှင့် ကတိကဝတ်အား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mrema က ပြောခဲ့သည်။
မကြာသေးမီ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် အနာဂတ်လုပ်ငန်းအတွက် စံပြကောင်းဖြစ်ပြီး အခြားသောနိုင်ငံများကလည်း အတုယူ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း ဇီဝမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအပေါ် ကြီးမားသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိခဲ့ပြီး ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ မျဉ်းနီတားမူဝါဒသည် ဆန်းသစ်မှုရှိပြီး ကောင်းစွာဦးဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ပေကျင်းအခြေစိုက် ဗြိတိန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ချစ်မြတ်နိုးသူနှင့် Paulson Institute အဖွဲ့ဝင် Terry Townshend က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီကနေ့ သမ္မတ ရှီရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို ကူညီပံ့ပိုးဖို့ ဇီဝမျိုးကွဲများ ရန်ပုံငွေအသစ် ကြေညာချက်ဟာ အမှန်တကယ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဇီဝမျိုးကွဲများရဲ့ အရေးပါဆုံးကို သဘောပေါက်နားလည်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Townshen က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-13 00:50:54|Editor: huaxia
KUNMING, Oct. 12 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Tuesday called for efforts to buildacommunity of all life on Earth atakey UN meeting to enhance global biodiversity protection.
1- Chinese President Xi Jinping deliversakeynote speech via video link at the leaders’ summit of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP15) held in Kunming, southwest China’s Yunnan Province, Oct. 12, 2021. (Xinhua/Li Xueren)
2- Inger Andersen, UN under-secretary-general and executive director of the UN Environment Programme, deliversaspeech via video during the opening ceremony of COP15 in Kunming, southwest China’s Yunnan Province, Oct. 11, 2021. (Xinhua/Jin Liwang)
3- Elizabeth Maruma Mrema, executive secretary of the Convention on Biological Diversity, deliversaspeech during the opening ceremony of COP15 in Kunming, southwest China’s Yunnan Province, Oct. 11, 2021. (Xinhua/Chen Yehua)
4- Aerial photo taken on May 17, 2021 shows the mountains surrounded by cloud and mist in Wuyishan National Park, southeast China’s Fujian Province. (Xinhua/Jiang Kehong)
5- Aerial photo taken on Aug. 3, 2021 showsaphotovoltaic power station in Tujing Village, Yunzhou District of Datong City, north China’s Shanxi Province. (Xinhua/Cao Yang)
BEIJING, Oct. 13 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will on Thursday attend via video link the opening ceremony of the Second United Nations Global Sustainable Transport Conference and deliverakeynote speech, Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying announced here Wednesday. Enditem